Ọkachamara Semalt: Esi Gbochie Ntuziaka Ntuziaka nke Na-ebibi Nchịkọta Ntuziaka Nchịkọta Gị
Fausto Andrés Trujillo García
Mgbe ụfọdụ, ebe nrụọrụ weebụ gị nwere ike ịnweta okporo ụzọ ntụgharị. N'okwu a, okporo ụzọ a nwere ike ịkpata ọtụtụ nsogbu na nchịkọta nchịkọta gị. Onye ọ bụla webmaster chọrọ data ziri ezi na ziri ezi maka ebumnuche ahịa ahia. Spambots na ebe ndị ọzọ na-enye spam akwụkwọ ntanetị nwere ike ịnwe ọtụtụ ozi gbasara data spam. N'okwu a, ndị ọrụ nwere ike ịnweta ozi ezighi ezi banyere ọganihu nke ubi e-commerce. Iji wepu okporo ụzọ ndị na-adịghị na ya site na data gị, ọ nwere ike ịdị mkpa ka ị mụta otu esi egbochi spam ntinye aka na data nchịkọta gị.
N'isiokwu a, Jack Miller, onye ọrụ ọkachamara nke Semalt Digital Services, nyere ọtụtụ usoro iji nyere gị aka weghachite okporo ụzọ ziri ezi:
Ịchọpụta ụzọ ahia
N'ọtụtụ ọnọdụ, okporo ụzọ mgbagwoju anya sitere na ngalaba ndị na-anwa ịzochi aha nnabata. Ejighị okporo ụzọ nwere ike ịnweta peeji nke na-ebute peeji . Ụlọ ọrụ Blackhat SEO ndị na-ekwe nkwa ngwa ngwa n'ihi ọnụ ala na-enwekarị ọtụtụ n'ime ụzọ azụmahịa ndị a. Nnukwu nje botnet gụnyere ọtụtụ aha nnabata ndị na-ebugharị nleta ibe weebụ na ebe nrụọrụ weebụ gị. N'ọtụtụ ọnọdụ, ozi a na-emetụta ụzọ nke ọtụtụ ndị na-arụ ọrụ na ọnụ ụzọ a. Ojiji nke ndị na-eweta nchekwa na-enweghị nchebe na-eme ka ohere ịnweta ụdị ụdị okporo ụzọ dịwanye njọ.
Onye nwere ike ịntanetị nwere ike ị nweta ihe nchịkọta Google Analytics..Iji ihe onwunwe ID gị, ọ nwere ike iwelie ma ọ bụ belata ihe ọ bụla metric ma ọ bụrụhaala na ha maara ihe ndị Google Analytics ha na-edezi. Nchịkọta Google Analytics ọ bụla na-edozi ụdị nleta weebụ. N'ọnọdụ ndị ọzọ, ụfọdụ ndị na-eweta email na-achọpụta ozi-e na-abịa site na ngalaba spam. Ọ dị mkpa iji onye na-eweta email echekwara maka ọtụtụ n'ime ngalaba.
Esi egbochi spam
Ị nwere ike igbochi ngalaba spam ha site na iji faịlụ .htaccess na mgbọrọgwụ nke ngalaba gị. Ndị ọrụ na-eji ihe nkesa Apache nwere nhọrọ nke iji ọtụtụ koodu na weebụsaịtị ha. Ọ dị mkpa ilekọta mgbe ị na-agba ọsọ usoro ndị a na ebe nrụọrụ weebụ gị. Ụfọdụ n'ime koodu ndị a nwere ike ịdọrọ ala ahụ dum site na sava. Ọzọkwa, ha nwere ike iduga ohere izere ohere nke ntinye ederede.
I nwekwara ike iji nzachapu spam Google Analytics. Imirikiti webmasters nwere akaụntụ Google Analytics iji nyere ha aka na ọrụ nchịkọta weebụ ha. Na tab taabụ, ị nwere ike igbochi okporo ụzọ na-abịa site n'otu ngalaba ị họọrọ. Ị nwere ike ịgbakwunye nchịkọta omenala nke nhọrọ gị. Ihe nzacha a nwere ike igbochi usoro okporo ụzọ na-abịa site n'ubi ndị bu spam. Ị nwekwara ike nyochaa okporo ụzọ site na adreesị IP. Ojiji nke kuki na akụkụ ndị ọzọ nwere ike ime ka nchekwa dị na ebe nrụọrụ weebụ gị.
Ọ bụrụ na ị na-ezigara ozi ọma, ọ ga-abụ ọrụ siri ike na-eche ọtụtụ ọrụ e-azụmahịa. Dị ka ọmụmaatụ, ndị mmadụ na-arụ ọrụ na ebe nrụọrụ weebụ ịntanetị nwere ike izute ọtụtụ spam yana azụmahịa dị iche iche. Ịmụta iji gbochie okporo ụzọ ịtụgharị uche pụrụ isi ike. Ntuziaka a nwere ike inyere gị aka na ndụmọdụ gbasara otu esi egbochi spam na-ezigara gị na ozi gbasara ebe nrụọrụ weebụ gị. Ọzọkwa, ị nwere ike nyocha bọtịnụ site n'ịme nleta weebụ dịgboroja na mpaghara gị.